Ubani phakathi kwethu ongakaze wazama Uzbek yangempela isinkwa enongiwe uqweqwe kuphekeke. Indishi ungukugcwalisa omkhulu kebab shish futhi pilaf. iresiphi Classic kuhilela baking amakhekhe kuhovini ubumba - tandyr. Kukhona-ke eqala ukuthanda esiyingqayizivele. Yiqiniso, kulesi simo ngeke bakwazi ukubhaka ngale ndlela, kodwa akubalulekile kangako, into esemqoka - ukwenza ikhekhe esingenamvubelo. Namuhla sizobe uchazwa lula ukulungiselela ukhetho kuyokushiya umangele izimfanelo ezikhethekile ukunambitheka.
Ukupheka esingenamvubelo ikhekhe, lokhu kuthathe: ufulawa (500 g), yogurt (700 ml), usawoti, ushukela kanye izinhlamvu ze-sesame. Ufulawa kufanele exutshwe usawoti kanye noshukela. Kancane kancane uthele kefir ekamelweni lokushisa bese uxove inhlama nokunwebeka. Kungcono hlenga ufulawa ukuze inhlama ukhiqize Airy ethambile nokuningi. Njengoba yenziwe inhlama ngaphandle ungene eligcotshisiwekuhovini baking sheet kanye ukunikeza round ukuma ngezandla zakhe. Ungenza ikhekhe ngaphandle imvubelo Ngamafuphi, izingcezu ezimbalwa.
Isendlalelo kwaphumela kumele ube mncane phakathi futhi emaphethelweni ezihambisanayo. Ngaphambi bayobhaka inhlama kancane moisten ngamanzi. Nge ekhethekile izibuko okwenyanga noma confectionery ukwenza isikhunta phezu Lavash nezateylivye imidwebo ufafaze zonke izinhlamvu ze-sesame. Bhaka at 220 C kuze segolide brown yegolide. Iphele amakhekhe kuhhavini ngaphandle kwesembozo imvubelo ithawula nokubhaka baba esithambile. Top ungakwazi ufafaze ushizi vukuza noma amakhambi uma uthanda. I ukugxusha kungabuye ifakwa ngqo phambi bayobhaka inhlama - kuvela Meatless okumnandi pie.
Inyama amakhekhe kuhhavini esingenamvubelo yogurt
Izingxenye: ilitha ephansi fat yogurt, 200 of inyama nengulube (lanoma yiluphi uhlobo lwenyama inyama), ufulawa (2 izinkomishi), ushizi (200), baking soda, ushukela, usawoti.
Step by step ukupheka
ushizi Grate: I-leresiphi kangcono bufaneleke grade okuqinile; mix it nge ufulawa, ke uthele yogurt, ushukela ukunambitha, usawoti kanye isipuni baking soda (ucime uviniga). Beka inhlama etafuleni, ngesandla uthele amafutha kancane zemifino, ukuze inhlama asisho anamathele xova kahle.
Sehlukanisa ke ngenani amabhola, kuye ngokuthi kungakanani ufuna ukuthola amaqebelengwana. Bun ngamunye welule izandla zakho futhi ukunikeza round ukuma. Phezulu babeka inyama eluhlaza nengulube. Oku kungaba Fry it ne anyanisi. Esimweni sethu, kuba njengoba injalo iluhlaza. kancane Prisolit inyama, amboze kwesigubhu yesibili bese uthumela Bhaka imizuzu 30.
It kuvela uhlobo pizza avaliwe. Amakhekhe esingenamvubelo kungenziwa ethosiwe epanini ukuthosa, kakhulu, kuvela ezihlwabusayo kakhulu. Kodwa lapho kubhakwa isidlo ngaphansi amafutha. Ngenxa yalokho, aphume segolide, kamnandi, ushizi ezimanakanaka pitas Uzbek. Nakhu ukuthi ukubhaka ikhekhe esingenamvubelo ovela imikhiqizo elula futhi okungabizi. Fast, kulula futhi linesizotha uthole ukudla okunempilo nokunomsoco.
Njengoba ukugcwaliswa ushizi kakhulu nge imifino, izaqheqhe nge garlic, ngoqwembe ahlukahlukene zemifino. Ezinsukwini ukudla futhi ukudla ngesikhathi baking ingalungiswa emanzini ngaphandle ushukela nosawoti. Waba iyiphi sauce uhlobise. zokupheka National akunzima ukulungiselela, njengoba kungase kubonakale, into esemqoka - ukulandela zonke izincomo, futhi ungakwenza ungcono ngisho nangaphezu kwanoma labapheki. Emva ukupheka wena kanye nezihlobo.
Ubungane bungumlingiswa noma indlela yokuziphatha?
Ukuvuvukala 12 duodenal isilonda: Izimbangela Nezingozi Ukwelashwa